Home Wararka Gudaha Socdaalka: Wax ka ogow baasaboorka Soomaaliya iyo lacagta ay ka hesho dowladda
Socdaalka: Wax ka ogow baasaboorka Soomaaliya iyo lacagta ay ka hesho dowladda
Qiimeyn sanadle ah oo la sameeyay ayaa muujineysa in Japan iyo Singapore ay ku loolamayaan kaalinta koowaad ee baasaboorka ugu qiimaha iyo macnaha weyn dunida. Waxay Soomaaliya uga jirtaa liiskaas kaalinta 106-aad, iyada oo muwaadiniinta Soomaaliya ay tegi karaan dalal dhowr iyaga oo aan u baahneyn dal-ku-gal.
Haddaba, dowladda Soomaaliya lacag intee la eg ayay ka heshaa soo-saaridda baasaboorka, dal-ku-galka la siiyo dadka ajnebiga ah, garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan iyo hay’adda duulimaadka hawada ee Soomaaliya.
Sida ka muuqata miisaaniyadda sanadkan ee loo gudbiyay baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, dowladda Soomaaliya ayaa sanadkan ka heleysa daabacaadda baasaboorka lacag dhan USD $5,528,165. Lacagtaas ayaa ah wadarta guud ee qiimaha la filanayo inay kasoo xarooto baasaboorka Soomaaliya. Baasaboorka ayaa ugu kacaya qofka jooga Muqdisho lacag dhan USD $108 laakiin gobolada iyo dibeda waxaa la qaadaa lacag intaas ka badan oo mararka qaar gaari karta USD $500.
Sidoo kale, dadka ajnebiga ah ee dalka soo gala ayaa la filayaa inay kasoo xarooto lacag dhan USD $3,485,367 sanadkan. Dad badan oo isugu jira ajnebi iyo Soomaali heysta baasabooro dalal kale ayaa dalka yimaada, iyada oo duulimaadyo toos ah ay Muqdisho ku yimaadaan shirkada Turkey airlines iyo Ethiopia airways. Dadkaas ayaa qofkiiba laga qaadaa lacag dhan $60 oo dal-ku-gal ah.
Dakhliga baasaboorka Soomaaliga
$5,500,000Lacagta laga filayo in laga soo xareeya baasaboorada sanadkan
$108Lacgat uu bixinaya qofka jooga Muqdisho ee dalbada baasaboorka
$60Lacagta dal ku galka ee laga qaado dadka ajnebiga ah ah qofkiiba
Source: Laanta Socdaalka
Meelaha kale ee dowladda Soomaaliya ka hesho dakhliga waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan, oo ay maamusho shirkada laga leeyahay Turkeyga ee Favori. Dowladda ayaa shirkadaas ka qaadata lacag dhan 2,593,767 sanad walba. Shirkada ayaa maamusho howlaha garoonka, iyada oo ay jiraan shaqaale Soomaali iyo ajnebi ah oo u shaqeeya.
Sidaa si la mid ah, dowladda Soomaaliya ayaa dakhliga xoogan ka hesha diyaaradaha dulmara hawada Soomaaliya. Hawada Soomaaliya oo hadda laga maamulo xarun ku taal Muqdisho ayaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay kuwa ugu mashquulka badan gobolka, iyada oo ay Soomaaliya dulmaraan duuliyaadyo meelo kale kasoo kacay oo u kala gooshaya dalal kala duwan. Sidaas darteedna, dowladda Soomaaliya ayaa sanadkan ka filaysa inay ka hesho ururka ay ku mideysan yihiin diyaaradaha dunida ee IATA lacag dhan USD $15,735016.
Mas’uuliyiinta sarsare ee Soomaaliya ee haysta labada jinsiyadood
Aqoonsiga baasaboorka Soomaaliga
Dunida oo dhan, saddex iyo sodon dal ayaa lagu tegi karaa baasaboorka. Ma ahan in dalalkaas oo qofka Soomaaliga ah geli karo dal-ku-gal la’aan. Laakiin waxaa jira sagaal dal oo qofka wata baasaboorka Soomaaliya ku tegi kara dal-ku-gal la’aan.
Waddamada adduunka ayaa isugu faana awoodda baasaboorrada oo ah inta dal ee qofka wata uu ku tegi karo si sahlan.
Japan iyo Singapore ayaa sanadkan isku heysta kaalinta koowaad, marka la eego qiimaha baasaboorkooda.
Baasaboorka Soomaaliya ayaa sanadkan kaalinta 106-aad kasoo galay liiska caalamka. Haddaba waa kuwee dalalka uu qofka Soomaaliga ah gali karo isagoo aan u baahneyn Visa lasii qaato?
Hase ahaatee dalalkaas dhammaantood ma wada aha kuwo uu qofka Soomaaliga ah ee baasaboorka Soomaaliga ah wata ku geli kato Visa la’aan
Sida aan kasoo xigannay bogagga wax ka qora arrimaha socdaalka iyo dal ku galka ee VisaIndex iyo PassportIndex, 9 waddan ayaa baasaboor Soomaali lagu tagi karaa iyadoo aan wax Visa ah la dalbanin.
Dominica – oo ah dal kale oo ku yaalla isla gobolka Caribbean. Balse ma aha waddanka la dhoho Dominican Republic, inkastoo ay isku gobol yihiin.
Malaysia – oo ah waddan ku yaalla qaaradda Aasiya. Hase yeeshee waqti xaadirkan waxaa baasaboor Soomaaliga looga mamnuucay dalkaas sababo la xiriira cudurka safmarka ah ee Covid-19.
Ish wararka BBC SOMALI
Previous articlekamarada: Maxaad ka taqaanaa warshaddii sameyn jirtay Sunta halista ah ee uu Ruushka ku aamusin jiray cadowgiisa?
Next articleWARBIXIN: Nunez, Haaland & Saxiixyada Ugu Waaweyn Ee Ilaa Haatan La Dhamaystiray